अपि पावरले बढायो शतप्रतिशत नाफा, प्रति सेयर आम्दानी कति ? — Motivatenews.Com
अपि पावरले बढायो शतप्रतिशत नाफा, प्रति सेयर आम्दानी कति ?
काठमाडौं – अपि पावर कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा ७ करोड ३१ लाख ६४ हजार रुपैंया खुद नाफा कमाएको छ । गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा अपिले ३ करोड ८१ लख ४० हजार रुपैंया खुद नाफा कमाएको थियो । समीक्षा अवधिमा अपिको खुद नाफा ९२ प्रतिशतले बढेको हो ।
कम्पनीले चैत्र मसान्त सम्ममा विद्युत बिक्रीबाट १५ करोड ३४ लाख तथा अन्य आम्दानीबाट १९ लाख ६७ हजार गरि कुल १५ करोड ५४ लाख आम्दानी गरेको छ ।
कम्पनीको प्रति शेयर आम्दानी ८ रुपैयाँ १९ पैसा र प्रति शेयर नेटवर्थ १०६ रुपैयाँ ४४ पैसा छ । गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा अपिको प्रतिशेयर आम्दानी ४ रुपैंया ४८ पैसा तथा प्रतिशेयर नेटवर्थ १०३ रुपैंया ६७ पैसा थियो ।
१ अर्ब १९ करोड ७ लाख रुपैंया चुक्ता पूँजी रहेको अपिको जगेडा कोषमा ७ करोड ६६ लाख रुपैंया सञ्चित छ ।
८।५ मेगावाट क्षमताको नौगड गाढ आयोजना संचालन गरिरहेको कम्पनीले ८ मेगावाट प्रशारण लाईनमा जडान गर्ने तयारी गरिरहेको छ । ४० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि अपिले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको छ ।